Ciidamada Kenya oo mareykanka tababaro siineysa kuwaas oo midka ah howl galka AMISOM | Somaale.com
Ciidamada Kenya oo mareykanka tababaro siineysa kuwaas oo midka ah howl galka AMISOM
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay sanadka soo socda ee 2013-da ay tababaro siineyso Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howl galka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM.
War ka soo baxay Xarunta Wasaarada Gaashaandhiga ee Pentagon-ka ayaa lagu sheegay in 200-askari oo ka mid ah Ciidamada Kenya ay heli doonaan tababar milateri oo heerkoodu sareeyo.
Tababarka la siinayo ciidamada Kenya ayaa waxaa uu noqon doona mid ka saacidi doona la dagaalanka Al-Shabaab, sida lagu yiri warka ka soo baxay Pentagon-ka Mareykanka.
Jen Carter Ham oo ah Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa sheegay inay diyaariyeen qorshayaal lagula dagaalamayo Shabaab, isla markaana ay Ciidamada AMISOM ka taageerayaan howl galada ay ka wadaan Soomaaliya.
Mr Carter Ham ayaa sheegay in qorshahan loogu tala galay ilaa 35-dal ay ka mid yihiin Libiya, Mali iyo dalal kale tababaro ku aadan la dagaalanka Argagixisada la siin doono Ciidamada, waxaana uu tilmaamay in kenya ay ka mid noqotay dalkii u horeeyay ay siinayaan tababarkan.
Ciidamo ka socda Kenya oo gaaraya kumanaan askari ayaa dhowaan ka mid noqday howl galka nabad ilaalinta AMISOM, kadib markii sanadkii hore ay ka soo tallaabeen xuduuda Soomaaliya si ay ula dagaalamaan Shabaab.
Mareykanka ayaa taageerada ugu badan siiya Ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya, kuwaasoo haatan ku baahaya gobolo cusub oo ay ka talin jireen Al-Shabaab oo horaantii sanadkan ku biirtay urur weynaha Al-Qaacida.
Kenya oo qiratay dilka dad rayid ah 0
Duulaanka Kenya & Damaca Kismaayo: Saca Naasaha Adag iyo Weedha Maxaa Kulmiyay?!!!. 0
Soomaali badan ayaa dhalashada Sweden qaadatay